Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Dala Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Dala
Dala Township has long been established Mons. The middle of the 9th century to the 1st century AD, was known as Suvarnabhumi's urban country. The City was known Dala City until AD (1386) to (1422) within Innwa and Hantharwaddy (36) years’ war. A turn-based, Mon to turnacity resident, Was managed by the governor. (Dala), Bagan period (Ta La), called Mon language (Ta La), call (Tont Ta Lae) (Tont Ta Lae) (City of Heroes) definition, according to city records, accident. According to ancient history in the country's southern tip isaformer fort.
The origin of the cities included in the Yangon municipal area by Ward (Ward 17) organizations. In 1989, in accordance with urban features in order to progress and development will becomeacity ward (Ward 6) according to further identify and properly placed. Now, Ward (Ward 24) Village group (23), It became village until the village (54).
Dala Township located south of Yangon, Yangon. Dala Township latitude 16 degrees 20 minutes north and 16 degrees 23 minutes east longitude and 96 degrees 16 minutes, is located between 96 degrees 18 minutes and (86.51 square miles) wide. Even before (7 miles) west and north (10 miles) long. Dala Township east side of the border with the Rangoon and has, Kawhmu Township on the south and bordering it. Being the west bordering with Ton Tae Township, Yangon River and the north border.
Dala Township flat terrain (12.214) above sea level, is located. Dala Township temperate climate, with the highest temperature (38 ° C) and low temperature (20 ° C). Dala Township has Kachin, Karen, Chin, Mon, Rakhine, Shan, Indian and other nationalities live.
Dala Township located Yangon commercial city centers. Township local agriculture / services are the main work. Dala Township Road, located on the road at the intersection of routes in the city transport. The main products of the rice. Dala Township energy / electric sound session Yadanar, Hello fuel outlets, 1 Bank of KBZ Bank .INGO and the many local corporate offices.
Postal codes 11261.
Dala Township has prominent market prices are out of joint, Surely the market and prices. Famous pagodas Kyaik Danote Pagoda, Maha Thingyan Pagoda And Shwe Saryan Pagoda, Kyae Thoon Pagoda, West School Pagoda older Some wounds.
ဒလမြို့နယ်သည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် မွန်တို့ တည်ထောင်ထားသောနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အေဒီ (၁) ရာစုမှ (၉)ရာစု အလယ်ပိုင်းခန့် အထိ သုဝဏ္ဏဘူမိနိုင်ငံ၏ မြို့ပြတစ်နိုင်ငံ အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ အေဒီ (၁၃၈၆) မှ (၁၄၂၂) ခုနှစ်အထိ အင်းဝနှင့် ဟံသာဝတီ(၃၆)နှစ်တိုင် စစ်ပွဲတွင် ဒလမြို့သည် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ မြန်မာတစ်လှည့် ၊ မွန်တစ်လှည့် မြို့စားမြို့ခံ၊ မြို့ဝန်များ ပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ (ဒလ) ကို ပုဂံခေတ် (တလ) ဟုခေါ်ဆိုပြီး၊ မွန်ဘာသာစကားအရ (တလ) ကို (တုန်တလဲ့) ခေါ်ဆိုကြောင်း ၊ (တုန်တလဲ့) မှာ (သူရဲကောင်းမြို့) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း မှတ်တမ်းများအရသိရှိရပါသည်။ ရှေးသမိုင်းကြောင်းများ အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်စွန်းခံတပ် ဖြစ်ခဲ့သည့် နေရာဖြစ်သည်။
ဒလမြို့သည် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းပါဝင်ပြီး မူလက ရပ်ကွက် (၁၇)ရပ်ကွက် ဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ဖြစ်လာရေးနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်လာမှု ရှိလာစေရန်အတွက် မြို့ကွက်ပုံစံနှင့်အညီ ရပ်ကွက်(၆)ရပ်ကွက် ထပ်မံဖော်ထုတ်ကာ စနစ်တကျ ပြန်လည်နေရာ ချထားပေးခဲ့သည်။ယခုအခါ ရပ်ကွက် (၂၄)ရပ်ကွက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၂၃)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ (၅၄)ရွာ အထိ ရှိလာခဲ့သည်။
ဒလမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဒလမြို့နယ်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၀ မိနစ်နှင့် ၁၆ ဒီဂရီ ၂၃ မိနစ်ကြား ၊အရှေ့ လောင်ဂျီတွဒ် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၆ မိနစ်နှင့် ၉၆ ဒီဂရီ ၁၈ မိနစ်အကြားတွင် တည်ရှိပြီး အကျယ်အဝန်းမှာ (၈၆.၅၁) စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်းပါသည်။ အရှေ့မှ အနောက်သို့(၇)မိုင်ရှိပြီး တောင်မှ မြောက်သို့(၁၀)မိုင် ရှည်လျားပါသည်။ဒလမြို့နယ်၏ အရှေ့ ဘက်တွင် ရန်ကုန်မြစ်ဝနှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပြီး၊ တောင်ဘက်တွင် ကော့မှူးမြို့နယ်တို့ နှင့်ထိစပ်လျက် ရှိပါသည်။ အနောက်ဘက်တွင် တွံတေးမြို့နယ်တို့ နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပြီး၊ မြောက်ဘက်တွင် ရန်ကုန်မြစ်တို့ နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။
ဒလမြို့နယ်သည် ညီညာပြန့်ပြူးသည့် မြေအနေအထားဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၁၂.၂၁၄)ပေတွင် တည်ရှိပါသည်။ ဒလမြို့နယ်သည် သမပိုင်းရာသီဥတုရှိပြီး အမြင့်ဆုံးအပူချိန် (၃၈ံC) နှင့် အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်မှာ (၂၀ံC ) ဖြစ်ပါသည်။ ဒလမြို့နယ်တွင် ကချင်၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ဗမာ၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊အိန္ဒိယနှင့် အခြား အစရှိသည့်လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။
ဒလမြို့နယ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတည်ရှိပြီး စီးပွားရေးအချက်အခြာ ကျသောမြို့ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူလူထုသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း/ဝန်ဆောင်မှူ လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဒလမြို့နယ်သည် ကုန်းလမ်း၊ရေလမ်းကြောင်းများဆုံရာ လမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သော မြို့ဖြစ်သည်။ အဓိက ထွက်ကုန်မှာ ဆန်စပါးဖြစ်ပါသည်။ဒလမြို့နယ်၏ စွမ်းအင်/လျှပ်စစ်ကဏ္ဏအနေဖြင့် ရတနာ၊Hello စက်သုံးဆီ ဆိုင်များရှိပါပြီး ၊ ဘဏ်အနေဖြင့် KBZ ဘဏ် ၁ ခုရှိသည်။INGO နှင့် Local အသင်းအဖွဲ့ရုံးများလည်းရှိသည်။
စာပို့ သင်္ကေတမှာ ၁၁၂၆၁ ဖြစ်သည်။
ဒလမြို့နယ်တွင် ထင်ရှားသောဈေးများမှာ ကမာကဆစ်ဈေး၊အောင်ဇေယျဈေး နှင့် ဒလဈေးတို့ ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားသော စေတီပုထိုးများမှာ ကျိုက်ဓနုတ်စေတီတော်ကြီး ၊ မဟာသင်္ကြန်ဘုရားကြီး ၊ ရွှေစာရံစေတီ ၊ ကြေးသွန်းဘုရားကြီး ၊ အနောက်ကျောင်းဘုရားကြီး နှင့် အနာဂါမ်စာရာသက်ကြီးတန်ဆောင်း ဖြစ်သည်။
Dala Demographic & Economic Activities
Total Population 172,857*
Percentage Of Urban Population 69.1%
Area (km2) 224.1**
Population Density (persons per km2) 771.5 persons
Number Of wards 24
Number Of Village Tracts 23
Population In Conventional HouseHolds 170,363 117,577
Number Of Convetional Households 37,912 25,331
•In Dala Township, there are more females than males with 96 males per 100 females.
•The majority of the people in the Township live in urban areas with (69.1%).
•The population density of Dala Township is 772 persons per square kilometre.
•There are 4.5 persons living in each household in Dala Township. This is slightly higher than that of the Union average.
Productions315
Retails 363 831
Wholesales 73 285
Services 271 844
All about Dala
: Dr Sein Mya Aye
: +959 420 000 732
: U Shwe Yin
: +959 799 292 935
: U Htway Tin
: +959 420 209 466